प्रमाण बलियो भएकाले लिम्पियाधुराको मामिलामा नेपालले जित्ने सम्भावना बलियो छ – कदर न्यूज अनलाईन डिजिटल पत्रिका : Oneline Digital Kadarnews:
प्रमाण बलियो भएकाले लिम्पियाधुराको मामिलामा नेपालले जित्ने सम्भावना बलियो छ
लेखक : डा. कुलचन्द्र गौतम, पूर्व उपमहासचिव–संयुक्त राष्ट्र संघ
नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको ग्राफ ह्वात्तै बढिरहेका बेला नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्यो । कूटनीतिक माध्यमबाट दुई देशबीच मिल्न बाँकी सीमा व्यवस्थापनका लागि सहमति जनाएको नेपालले एकाएक नक्सा प्रकाशित गरेको भने होइन ।
पञ्चशीलमा आधारित असलंग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको नेपालले छिमेकीले थोपरेको समस्याबाट पार पाउन के गर्नुपर्ला ? अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने उपाय के हुन
सक्ला ? यिनै विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्व उपमहासचिव डा. कुलचन्द्र गौतमसँग हामीले कुराकानी आजको समय सान्र्दभिक भएकाले हामी यहाँ जस्ताको तस्तै यहाँ हामी साभार गर्न चाहन्छौं ।
कोभिड–१९ महामारीसँग जुधिरहेका बेला भारतले नेपाली भूमिमा बनाएको सडक उद्घघाटन गरेपछि सीमा विवाद चर्कियो । यो विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
दुई सय वर्ष पहिले हाम्रो पश्चिमी सिमाना टुङ्गिएदेखि नै भारतीय अतिक्रमणको नेपालले बेला(बेलामा विरोध गर्दै आएको छ । तर, नेपालको विरोधलाई उसले गम्भीररुपमा लिएको पाइँदैन । उनीहरूले षडयन्त्रपूर्वक त्यसो नगरेको पनि होला रे तर नेपालीको संवेदनशीलतालाई पटक्कै बुझ्ने कोसिस गरेका छैनन् ।
ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्य नेपालको राम्रो छ । सुगौली सन्धिअनुसार कालीपूर्वका सबै नेपाल हो । सुरु–सुरुमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले बनाएको म्यापमा पनि लिम्पियाधुरा मुहान भएको नदीलाई नै अन्तर्रा्ष्ट्रिय सीमा देखाइएको छ ।
नेपालले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । यसलाई भारतीय सेना प्रमुखलगायतले चीनको इसारामा गरेको भनेको छ । त्यहाँको मिडियाले त नेपाल र चीनलाई जोडेर ह्यासट्याग नै चलाएको छ । भारतले जानाजान यस्तो गरिरहेको होला ?
पहिला–पहिला राजा महेन्द्रले ‘चाइना कार्ड’ खेलेको भनिन्थ्यो । अहिले भारतले चीनको इसारा र्गयो भन्ने आरोप लगाएको छ । वास्तवमा त्यो नेपाललाई दोषी देखाउने केही विषय नपाएपछि नेपालविरुद्ध चाइना कार्ड खेलेको हो ।
व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने म आफूलाई ‘ग्लोबल सिटिजन’ ठान्छु । मानव समुदाय बोर्डरका सीमाभित्र बाँधिनुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु । तर, चीनको इसारामा नेपालले अतिक्रमणको विरोध र्गयोभन्दा रगत उम्लेर आउँछ । साह्रै चित्त दुख्छ ।
यो विषयमा नेपाललाई चीनले मद्दत गर्न सक्दैन । गर्न चाह्यो भने पनि परिणाम उल्टो निस्किन्छ । यो नेपाल–भारतबीचको आन्तरिक समस्या हो भन्ने उसको जुन भनाइ छ, त्यो नै सही हो ।
तपाईंले अलि मसिनो गरी ख्याल गर्नुभयो भने भारतका समझदार, परिपक्व, कूटनीतिक अनुभव सँगालेका र गम्भीर मान्छेहरूले नेपाललाई यस्तो आरोप लगाएका
छैनन् । उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ, यो नेपालीको माग हो, नेपालीहरू आफ्नो अतिक्रमित भूमि फिर्ता चाहन्छन् ।
कुरा एकदमै सिधा छ, आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न । जसरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोभिड–१९ आफ्नो देशमा सबैभन्दा बढी फैलिएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) लाई आरोप लगाइरहेका छन् । आफ्नो कमजोरी लुकाउन डब्लुएचओलाई गालिरहेका छन् अहिले भारतले नेपालीमाथि लगाएको आरोप पनि त्यस्तै हो ।
पाँच वर्ष पहिले नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी लगायो । यसको प्रत्यक्ष मारमा लाखौं जनता परे । त्यतिबेला नेपाल भूकम्पबाट तङ्ग्रिएको पनि थिएन । त्यस्तो बेलामा पनि अरू देशले हाम्रो पक्ष लिएनन् । भूपरिवेष्ठित मुलुकमाथि अन्याय भयो भन्न कोही आएनन् । जबकि त्यो मानवीय दृष्टिकोणले साँच्चै अन्तर्राीष्ट्रयकरण हुनैपर्ने विषय थियो ।
कम्बोडियाभन्दा थाइल्याण्ड ठूलो र प्रभावशाली देश हो । धेरैको अनुमान थियो, मुद्दा थाइल्याण्डले नै जित्छ । तर, अन्तर्रा्ष्ट्रिय अदालतले फैसला कम्बोडियाको पक्षमा र्गयो । त्यसपछि त्यो मन्दिरमा थाइल्याण्डले आफ्नो दाबी छोड्यो । अदालतमा गएपछि ठूलै देशले जित्छ भन्ने हुँदैन भन्ने यसले देखाउँछ ।
तर, फैसला आएपछि कार्यान्वयन पक्ष पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । थाइल्याण्डले फैसला कार्यान्वयन गर्दिनँ भनेको भए विवाद जारी रहन सक्थ्यो । पाकिस्तानजस्तो भारतको सदावहार दुस्मन देशले नेपाललाई सहानुभूति त राख्ला । तर, औपचारिक फोरमबाट समर्थन नै गर्लाजस्तो लाग्दैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसँग पनि ‘ल इन्फोर्स’ गराउने सैन्य बल त हुँदैन । पक्ष विपक्षले नै फैसला मान्नुपर्ने हुन्छ ।
यो सत्य युग होइन । सत्यको पक्ष लिने र असत्यको विरोध गर्छ भन्ने लाग्दैन । त्यस्तो बेलामा शक्तिशाली भनिएका देशले पनि लाभहानि हेरेरै समर्थन गर्लान् । शत्रुको शत्रु मित्र भन्ने पनि सही हो । तर, पाकिस्तानीजस्तो भारतको सदाबहार दुस्मन देशले नेपाललाई सहानुभूति त राख्ला । तर, औपचारिक फोरमबाट समर्थन नै चाहिँ गर्ला जस्तो लाग्दैन ।
मानवसरोवर सडकको सन्दर्भमा भारतले यो बाटोलाई मैत्री बाटो बनाऔं, नेपालले पनि लाभ लिने गरी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरेन नि । भारतले त्यसो भनेको भए नेपालले लुरुलुरु मान्थ्यो वा मान्नुपर्थ्यो भन्ने कदापि होइन । तर, भारतले ‘सफ्ट टोन’ प्रयोग र्गयो भन्ने सन्देश चाहिँ त्यसरी जान्थ्यो । तर, वास्तविकता त उसले नेपाली भूमिमै सडक खनेको हो ।
सिधारुपमा गरिने कूटनीतिक पहल ट्रयाक–१ म पर्छ । व्यक्तिगत, जनस्तरको सम्बन्ध वा घुमाउरो बाटोबाट गरिने पहल ट्रयाक–२ हो । यतिबेला दुवैतिर ‘इमोसन’ देखिन्छ । शान्त र संयम आवश्यक छ । यो समस्याको निकास निस्कन लामो समय लाग्न पनि सक्छ ।